JEMES 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (JEM 1)
Akwụkwọ ozi a sitere nꞌaka m Jemes, onye bụ onyeozi Chineke na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst kwa. Ọ bụ unu ndị Juu kweere na Kraịst ka m na-edere ya. Unu ndị e sitere na mkpagbu a na-akpagbu unu mee ka unu gbasasịa biri nꞌebe dị iche iche nꞌụwa. Ndeewonụ!
Ọ bụrụ na ọ dị onye na-enweghị ụdị amamihe ahụ dị mkpa nꞌoge ọnwụnwa, ya rịọ Chineke ka o nye ya. Nꞌihi na Chineke na-enye onye ọ bụla rịọrọ ya amamihe nꞌefu. Ọ dịghị atakwa onye ọ bụla ụta.
Onye dị otu ahụ ekwesịghị ile anya na ọ ga-esite nꞌaka Chineke nata ihe ọ bụla.
Ka nwanna nꞌime Kraịst, nke bụ ogbenye nꞌihe nke ụwa a, ṅụrịa ọṅụ, nꞌihi na ọ bụ ọgaranya nꞌihu Onyenwe anyị.
Ka onye bụ ọgaranya nꞌakụ na ụba nke ụwa ṅụrịakwa ọṅụ nꞌihi na e meela ka ọ mata, na akụ na ụba ya abaghị uru nꞌihu Onyenwe anyị. E meela ka ọ ghọtakwa na ya onwe ya ga-anwụkwa, dị ka okoko osisi si ada nꞌala kpọnwụọ.
Nꞌihi na mgbe ọ bụla anwụ waliri chasie ike, wepụta okpomọkụ, ọ na-eme ka ahihia kpọnwụọ, ka okoko osisi daa nꞌala, ka mma ya gwụsịakwa.
Ka onye ọ bụla hapụ ịsị mgbe a na-anwa ya, “Ọ bụ Chineke wetaara m ọnwụnwa a.” Nke a abụghị eziokwu. Nꞌihi na ọ dịghị mgbe a pụrụ ịnwa Chineke ka o mee ihe ọjọọ. Ọ dịkwaghị anwa mmadụ ọ bụla ka o mee ihe ọjọọ.
Ya mere, ka onye ọ bụla hapụ iduhie unu ụmụnna m.
Ọ bụ nanị Chineke kpebiri ime ka anyị dịrị ndụ site nꞌokwu ya bụ eziokwu. O mekwara nke a nꞌihi na ọ chọrọ ka anyị bụrụ ụmụ mbụ ọ mụrụ nꞌezinụlọ ọhụrụ ahụ o mere ka ọ dịrị.
Chetanụ nke a ụmụnna m. Ka onye ọ bụla nwee ntị na-anụ ihe ọsịịsọ, na ire dị arọ ikwu okwu. Ka onye ọ bụla bụrụ onye iwe na-adịghị ewe ọsịịsọ.
Unu abụla ndị na-eji ntị ha na-anụ okwu ndụ ahụ nanị, site nꞌụzọ dị otu a na-aghọgbu onwe unu. Kama bụrụnụ ndị na-eme ihe okwu ahụ kwuru.
O lesịa onwe ya pụọ, ọ naechefukwa ihe ihu ya yiri ma nwa oge nta gasịa.
Ma nwoke ahụ nọgidesịrị ike na-ele anya nꞌime iwu ahụ zuru oke, nke na-eme ka mmadụ nwere onwe ya ee, nwoke ahụ na-aga nꞌihu ile na ime ihe iwu ahụ kwuru, hapụkwa ichefu ya, ka Chineke ga-agọzi mgbe ọ na-aga nꞌihu na-eme ihe ahụ.
JEMES 1 / JEM 1
JEMES 2 / JEM 2
JEMES 3 / JEM 3
JEMES 4 / JEM 4
JEMES 5 / JEM 5